कोरियामा निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ पुरस्कार प्राप्त लेख - Fonij Korea
निद्रामै थिएँ, म्यासेन्जरमा आएको फोनको घण्टीले ब्युझिएँ । हतार उठेर सिरानीनिर राखेको फोन तानें बिहानको छ बज्नै लागेको रहेछ । मनमा चिसो पस्यो । कतै आमालाई पो केही भयो कि ? नभन्दै बहिनीहरुले फेसबुक म्यासेन्जरबाट भिडियो कल गरेका रहेछन् । नेपालमा त अहिले मध्ये रात नै छ पक्कै आमालाई केही, भयो एकैचोटी मनमा धेरै कुराहरु खेल्न थाल्यो । मुटुको धड्कन एक्कासी बढ्न थाल्यो । काँपीरहेको हातले फोन उठाएँ । बेहोसीमा लठ्ठी सकेकी मेरी आमालाई बहिनी र भदैनीले अडेस लगाएर जबरजस्ती बिउँझाइ रहेका थिए । “माइजु आँखा खोल्नुस् ऊ दिदीलाई हेर्नुस् त दिदीलाई देख्नुभयो ?” मैंले आमा भनेर चर्को स्वरमा बोलाएँ । आमाले मेरो स्वर सुने होलान् आँखा खोल्ने प्रयास गरे, बल गरेर बोल्न खोजे तर बोली निस्केन । रोए जस्तो गरे हाँसे जस्तो गरे । धेरै कुरा भन्न खोजे झैं गरे । अनि एकपटक आँखा खोलेर कसैलाई खोजे जस्तो गरे मैंले छेउमा सुतिरहेकी छोरीलाई दोखाएँ । लाग्यो आमाले मसँग बिदा माग्दैछन् ।
मैंले आमालाई माफी माग्दै सम्झाउन थालें, “आमा, मलाई माफ गर्नुस् है । यस्तो बेला म तपाइको साथमा हुनुपर्ने हो के गर्नु समय र परिस्थितिले म तपाइको नजिक आउन सकिन । तपाईले धेरै दुख पाउनुभयो । मन नदुखाउनुस्, अब तपाईको रोगसँग छुटकारा पाउने दिन आयो तपाइले मुक्ति पाउनुस् । दुख नमानी खुशीसाथ जानुस् । तपाई त अब हाम्रो पितृ हुनुभयो, भगवान हुनुभयो, हामीलाई आर्शिवाद दिनुस् ।“ आमा मेरो कुरामा स्वीकृति जनाए झैं टाउको हल्लाउने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो । मनमा झन्झन गाँठो पर्दै गयो । आमाको त्यो कष्ठ हेर्न सकिरहेको थिइन । आमाले एकपटक सुरिलो र तिखो स्वरमा “नानी” भनेर बोलाउनुभयो । त्यहि बोली मेरो लागि अन्तिम बोली बन्यो ।
मैले आमालाई हेर्न सकिन फोन काटेर चिच्याउन थालें । म रोएको आवाजले छोरी पनि ब्युझियो । के भयो आमा ? किन यति बिहानै रुनुभएको ? प्रतिउत्तरमा आँसु मात्र झरिरहे । बोजुलाई सम्झेर रुनु भएको हो ? बोजुलाई केही हुन्न आमा नरुनुस् नौ वर्षकी सानी छोरी मलाई सम्झाउन खोज्दै थियो । छोरीलाई हेरें अनि आँसु पुछ्दै उठेर बाथरुम गएर नुहाएँ । दियो र कलस सफा गरेर आमाको नाममा बत्ती बालें ।
“यो जन्ममा जति दुख कष्ट भोग्नु भयो । अब आमा, तपाईको आत्माले शान्ति पाओस् बाँचुन्जेल धेरै दुख कष्ट भोगनु भयो । त्यत्रो ठुलो रोगसँग लड्नुभयो । पिंडाबाट मुक्ति पाउदै हुनुहुन्छ । ईश्वरको साथमा लिन हुनुहोस् अब तपाईलाई कहिल्यै कष्ट हुने छैन । कुनै विकसित मुलुकमा, राम्रो परिवारमा फेरी जन्म लिनुहोस् । त्यो जन्ममा तपाइलाई दुःख, पिँडा, अभाव र एक्लोपनको महशुस कहिल्यै नहोस् । आमा बुबा, श्रीमान्, छोराछोरीको माया पाउनुस्”, भन्दै प्राथना गरें । आमाले पहिल्यै भन्नुभएको थियो, “म मरेपछि अरु केही गर्नु पर्दैन एक हप्तासम्म ‘आमाको आत्माले शान्ति पाओस्’ भनेर बिहान बेलुकी दियोमा ठाडो पारेर बत्ती बालिदिनु । जुठो पनि तीनदिन मात्र बार्नु, विशेष नुन तेल र दुध चाँही नखानु ।“मैंले आमाले भने अनुसार नै गरें ।
आमाले यो संसार त्यागनु अघिल्लो रातभरी नै मलाई बोलाइराख्नु भयो रे । सायद, मलाई खोज्नु भएको होला । बिहानीपख मसँग भिडियो च्याटमा बोले पछि मलाई बोलाउन छाड्नु भयो रे, पछि बहिनीले सुनाइन् । मलाई काममा जानु थियो । आमाको बाक्य रहिसके पनि सास गएको थिएन । त्यसैले खान मन नलागे पनि थोरै खाना खाएर काममा गएँ । बहिनीले म्यासेन्जरमा आमाले भनिराखेका कुराहरु, हिसावकिताव, राखन धारन सम्वन्धि कुराहरु बताइरह्यो । तीन घण्टा काम गरेर घर आएँ । श्रीमान र छोरीको लागि बेलुकीको खाना बनाउने तयारी गर्दै थिएँ । ‘इन्टरनेशनल कलिङ’ भन्दै फोनको घण्टी बज्न थाल्यो । मन फेरी बेचैन हुन थाल्यो । फोन हेरें नेपालबाट बुबाको रहेछ । “छोरी, आमाले बिदा लिनु भयो नरुनु है मन बुझाउनु । हामी यो संसारमा आए पछि ढिलो छिटो एकदिन जानै पर्छ यो संसारकै नियम हो । जुवाइ र नातिनीलाई अहिले नभन्नु बेलुकीको खाना दिएर मात्र सुनाउनु ।“ म केही बोल्न सकिन फोन काटें । थचक्क ढोकैमा बसेर फेरी डाँको छाडेर रुन थालें । छोरी पनि मसँगै टाँसिएर रुन थालि ।
दुई वर्षदेखि ठुलो आन्द्राको क्यान्सरले थलिएकी मेरी आमालाई चार महिना अघि नेपाल गएर भेटेर आएको थिएँ । आमाको त्यो पिँडा, दुखाइ देख्दा रोगसँग छिटै मुक्ति पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । म फर्केपछि झन साह्रो भएर अस्पतालमै राखेकोले दिनहुँ जसो भिडियो कलमा कुरा हुन्थ्यो । आमा मलाई सँधै सम्झाउनुहुन्थ्यो, “मेरो पिर चिन्ता एउटै नलिनु है आफ्नो परिवार हेर्नु छोरीको राम्रो हेरविचार गर्नु । म त अब अस्ताउन लागेको जुन, त्यहिमाथि रोगले खाइसकेको मान्छे कति दिन, कति समय दुःख पाउनु लेखेको छ । दिन नपुगि काल नि नआउने रहेछ । अलि दुखाइ सहन सक्दिन त्यति मात्र हो तर मेरो पटक्कै चिन्ता नगर्नु । यहाँ मलाई हेर्ने मान्छेहरु धेरै छन् । हाम्रो भेट भइहाल्यो म खुशी छु म मरिहाले पनि त्यति टाढाबाट आउनुपर्दैन । पछि जहिले सम्भव हुन्छ एकडेढ बर्षमा त्यो बेला आउनु ।“ “ल ल हुन्छ, अहिले त मैंले चाहेर पनि आउन सक्दिन आमा । गाह्रो छ, तपाईलाई थाहै छ झनझन् कोरोनाको अरु रुपहरु फैलिरहेको छ । नेपालमा झन् धेरै गाह्रो छ अहिले त प्लेन पनि त्यति चल्दैन,” म आमालाई कोरोनाको कारण देखाएर आफ्नो बाध्यता बताइराख्थें । आमाले पनि मन बुझाउन सकुन भनेर । “छोरी सानै छे मलाई भन्दा उसलाई तेरो आवश्यकता छ छोरीको राम्रो ख्याल गर्नु धेरै पढाउनु । मेरो आर्शिवाद सँधै तिमीहरुलाई छ ।“ म थलिएकी आमालाई छाडेर कोरिया फर्किने बेला आमाले भनेकी थिइन् । अब आमालाई फेरी भेट्न पाउदिन भन्ने लागिसकेको थियो । त्यसैले म मानसिक रुपमै तयार भएर मन बुझाईरहेकी थिएँ ।
कोरोनाको महामारी मात्र नफैलिएको भए पनि त म जसरी भए पनि नेपाल जान्थें । आमालाई पनि कति धेरै भेट्न मन थियो होला आफ्नो अन्तिम अवस्थामा । आमाको भएको सन्तान म एक्लै त थिएँ नि म पराइघर गए पनि परदेशममा भए पनि आमाको काजकिरीया गर्ने कर्तब्य मेरो थियो । तर समय र परिस्थितिले साथ दिएन । मलाई यहि कुराले पिरोलिराख्छ । मेरो बाध्यतामा मलम लगाउदै बहिनीहरुले सम्झाइ राख्थे, “माइजुले कुनै गुनासो गर्नु भको छैन दिदी । एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । तपाई कोरिया गएर माइजुको उपचार गर्न सकियो तपाई नेपालमै भएको भए माइजुको उपचार गर्न नसकेर के हालत हुन्थ्यो । त्यसैले दिदीले पटक्कै पछुतो नमान्नुस् । माइजुको सबै चाहना पुरा भयो । माइजुले आफ्नै हातले लाख बत्ती बाल्ने चाहना थियो त्यो मात्र पुरा हुन सकेन अब माइजुको बर्षदिनेमा तपाई आएर पुरा गरिदिनुस् ।“
“ पहिला जे जस्तो भए पनि माइजु बिरामी भएदेखि नै मामा आएर माइजुको खुट्टामा ढोगेर माफी माग्नुभयो । अस्पतालमा पनि आइराख्नु हुन्थ्यो । मामाकै साथमा माइजुको सास गयो । मामासँग छोडपत्र नगरेको र माइजु मामाकै सतमा बस्नुभएकोले मामाले सिन्दूर लाइदिएर दागबत्ती दिएर अन्तिम संस्कार राम्रोसँग गर्नुभयो । मामा भएकोले तपाई नआए पनि केही फरक परेन । तपाइलाई कसैले केही भन्ने मौका मामाले दिनुभएन । त्यागेको श्रीमतीलाई अन्तिममा भए पनि कर्म गरिदिएर मामाले पुण्य कमाउनु भयो । मलामी आउने सबैले मामाको प्रशंसा गरे ।“ बहिनीको कुराले मेरो मन धेरै हलुका भयो । आमाको अन्तिम संस्कारमा पुग्न नसकेकोमा त्यति पछुतो लागेन । सायद आमाले पनि बुबालाई मनदेखि नै माफी दिनुभयो होला ।
दश वर्ष भएछ मैंले आमालाई छाडेर पर्देशिएको । त्यो अवधिमा आमा दुई पटक कोरिया आउनुभयो म तीन पटक नेपाल गएँ । फोनमा कुरा भइराख्थ्यो । तर यो पटक आमाले मलाई कहिल्यै नभेट्ने गरी सदासदाको लागि छाडेर जानुभयो । मेरो मुखबाट ‘आमा’ भन्ने शब्द अब कहिल्यै निस्कने छैन । म कसलाई आमा भनुँ ? अब म कसलाई भेट्न मेरो जन्मभूमि जाउँ ? म कसको लागि पार्ट टाइम काम गरु ? आमाबाट टाढा भए पनि कुनै दिन भेटिन्छ भन्ने हुन्थ्यो । तर अब त त्यो आश पनि रहेन । आमाको याद आउदा आमालाई फोन गरेर स्वर मात्र सुन्न पाउँदा पनि मनमा कति धेरै सन्तुष्टि मिल्थ्यो । अब त आमाको स्वर समेत सुन्न पाउदिन । साँच्चिकै आमालाई गुमाउनुको पिँडा अहिले महशुस गर्दैछु । यो सबै सपना भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
दिनमा मन बहलिए पनि रात पर्दै गए पछि मन अतालिन थाल्छ । छटपटिमै रात बित्छ । सास थुनिएझैं लाग्छ । मध्येरातमा उठेर कौशीमा जान्छु अनि क्षितिजमा चिहाउँछु । चिसो सिरेटोको झोंकासँगै आमाले स्पर्श गरे झैं लाग्छ । अनि कता कता ‘नानी’ भनेर बोलाएको आवाज कानमा ठोकिन्छ । झसंग हुन्छु । सायद, आमा मेरै वरिपरि होलिन् मलाई सम्झाइरहेकी होलिन् मैंले पो आमालाई देख्न सक्दिन, सुन्न सक्दिन । यताउती हेर्छु, सुनसान छन् बस्तीहरु, अन्धकार छन् रातहरु । टाउको उठाएर आकाशतिर हेर्छु, ताराहरु झिलमिल गर्दै चम्किरहेका छन् । ती मध्ये एउटा तारा मेरी आमा होलिन् सम्झिदै एक टकले हेरिरहन्छु । धर्तीमा बिस्तारै उज्यालोको किरण खस्दै जान्छ आकाशमा ताराहरु हराउदै जान्छन् । तीनै ताराहरुसँगै मेरी आमा पनि बिलाउदै जान्छिन् अनि स्मृति बनेर मनमा आइरहन्छिन् हरपल हरक्षण ।
विचरी मेरी आमा, ७४ वर्षको उमेरसम्म कहिल्यै मनमा खुशी, सुख, शान्ति र सन्तोषको सास फेर्न पाइनन् । जन्मिदै अविभावक गुमाइन् । टुहुरीलाई कस्ले माया गर्छ र ! बेबारिसे भएकी मेरी आमा अर्काको घरमा दुःख कष्ट सहदै हुर्किन् । छोरी मान्छे पढ्यो भने बोक्सी हुन्छ भन्ने त्यो बेलाको समाजमा जन्मिएकी मेरी आमाको बाल्यकाल घाँस दाउरा मेलापात र गोठालो गर्दै बित्यो । विवाहपछि पनि श्रीमानको मायाबाट बञ्चित हुन पुगिन् । विवाह गरेको केही वर्ष मै श्रीमान घर परिवार त्यागेर परदेशिएका थिए । नाबालक छोरी र बृद्धा सासुको स्याहारसुसार गर्दै आफ्नो जवानी, रहर र खुशीहरुलाई तिलाञ्जली दिएर समाजको अगाडि इज्जत जोगाएर शिर ठाडो पारेर बाँचिरहिन् । सारा जिन्दगी दुःख कष्ट र अभावहरुसँगै बिताएकी मेरी आमालाई बुढेसकालमा भएको एउटा सन्तानको सहारा पनि पाउन नसक्दा कति मनमा पिँडा हुन्थ्यो होला ।
भाग्यको खेल पनि खै कस्तो कस्तो । उमेर भइन्जेल पनि रोगले छाडेन बुढेसकालमा क्यान्सरले च्याप्यो । मर्ने बेलामा पनि आरामले मर्न सकिनन् । “उहिले खान पाइएन अहिले खान मिलेन । उमेर हुँदै र निरोगी हुँदै खान मन लागेको खाइराख्नु, गर्न मन लागेको गरिराख्नु, घुम्न मन लागेको ठाउँ घुमिराख्नु”, आमा कहिलेकाँही हामीलाई भन्ने गर्थिन् । “म कति पापिनी हरेछु, यति दुःख कष्ट भोगेर पनि सास जान सकेन । मैंले कुन जन्ममा के पाप गरेको थिएँ मलाई किन यति लामो सजाय दिनुहुन्छ भगवान । कि मेरो सास चट्ट छिनाइदेउ कि जाती गराइदेउ”, आमा बारम्बार यस्तै के के फलाक्दै छटपटाउथिन् । उनको पिँडा हामीले महशुस गर्न सक्थ्यौं तर बाँड्न सक्दैन थियौं । सन्तान घरभरी हुने, धनसम्पक्ति प्रशस्त हुनेखानेहरुलाई केही रोगले भेट्दैन, जसको बिरामी हुँदा पानी खुवाउने मान्छे सम्म हुन्न उसैलाई नै अनेक रोगले भेट्नु पर्ने । आमाको दर्दनाक स्थिति देखेर मनमनै ईश्वरलाई गाली गर्दै भन्थें, “हे ईश्वर मेरी आमाले कुन जन्ममा के पाप गरेकी थिइन् यो जन्ममा यत्रो सजाए दिदैछौ । कि त आमालाई रोगबाट मुक्ति देऊ कि त जिन्दगीबाटै मुक्ति देऊ ।“
मैंले सोचेको पनि थिएन डाँडामाथिको जून भइसकेकी मेरी आमालाई एक्लै छाडेर यति टाढा आइन्छ भनेर । एसएलसी दिएपछि गाउँमा आमालाई एक्लै छाडेर शहर पसें । फेरी शहरमा आमालाई एक्लै छाडेर परदेशिएँ । आमाले दुःख कष्ट भोगेर मलाई हुर्काइन् बढाइन् आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाइन् । पखेटा पलाईसके पनि आफ्नै जन्म दिने आमा, जन्मभूमि सबै त्यागेर क्षितिजपारी बिलाएँ । कोरोनाले गर्दा आमाको अन्तिम अवस्थामा पनि नेपाल जान सकिन । आमाले बोल्न सक्ने भइन्जेल कोरोनाका कारण देखाउनै आमाको मन बुझाइरहन्थें । आमा मन बुझाउदै भन्थिन्, “आउनु पर्दैन मेरो चिन्ता नगर । मलाई हेर्ने आफन्तहरु छन् । सबैलाई दुःख दिएँ मरिजान पाए हुन्थ्यो नि भने जस्तो नहुने रछ ।“
नौ वर्ष सासुको स्याहारसुसार गर्दै बित्यो । सासुकै कारण मैंले आमालाई कोरियामा सँगैं राख्न सकिन । सासु बितेपछि आमालाई यतै ल्याएर राखौंला भन्ने सोच थियो । तर सासु बितेको एक वर्ष मै आमाले पनि यो संसार छाडेर गइन् । मैंले आमालाई पैसा त दिन सकें तर साथ, खुशी र सन्तुष्टि दिन सकिन् । वास्तवमा भन्ने हो भने म आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएपछि मैंले आमाको मन धेरै दुखाएको छु । मेरो आमाले पढेको छैन, केही जान्दैन बुझदैन भनेर आमाप्रति जाग्ने गरेको घृणा वा लाज, आमासँग झर्किने गरेको ती पलहरु जब म आमा बनें, त्यसपछि मात्र महशुस भयो । अहिले पछुतो लाग्छ तर प्रायश्चित गर्ने मौका गुमिसक्यो । अतितलाई सम्झेर दुखित हुनु र पश्चातापको ज्वालामा जल्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन । म ईश्वरसँग एउटै प्रार्थना गर्छु, “मेरो आमाको आत्मालाई शान्ति मिलोस् ।“
नोट: सउलको सुकमेन महिला विश्वविध्यालय अन्तरगत एसियन महिला अध्ययन अनुसन्धान विभागद्धारा आयोजित कोरियनसंग विवाह गरेकी विदेशी महिलाहरुवीच कोरियन जीवन यापनक्रममा भोगेका अनुभुतीहरु बारे सम्पन्न १४ औ निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ठ हुन सफल बाला राईको लेख ।